Madaxda tenniska oo baaritaan ku dhawaaqay - BBC Somali
Madaxda tenniska oo baaritaan ku dhawaaqay
Maamulayaasha Teniska ayaa ku dhawaaqay baaritaan madaxbanaan oo ay ku samaynayaan musuqmaasuq la sheegay inuu ka dhex jiro ciyaaraha tenniska.
Arrintan waxay soo baxday kadib baaritaan ay sameeyeen BBC iyo Buzzfeed News oo iyagu soo saaray eedeymaha balaaran ee natiijada ciyaaraha laga sii heshiiyo.
Dhawaaqan waxaa jeediyay saraakiil ka tirsan tartanka tenniska ee ka socda Melbourne ee Australia.
Musuqmaasuq iyo eedeymo sheegaya in maamulayaasha tenniska ay si wanaagsan baaritaan ugu samayn waayeen ciyaaraha natiijadooda la sii go'aamiyo, waxay haraysay tartankii ugu horeeyay sanadkan ee tartanka teniska ee Grand slam.
Maanta magaalada Melbourne, hayadaha maamula ciyaaraha tenniska waxay ku dhawaaqeen inay si wada jir ah baaritaan ugu samaynayaan qaybahooda tenniska.
Baaritaanka ay wada sameeyeen BBC iyo Buzzfeed, waxay ku eedeeyeen qaybta qaabilsna tenniska inay ku guuldaraysatay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka la soo jeediyay, inkastoo hayadaha qamaarka ay muujinayeen tuhun ku saabsan qaabka lacagta lagu kala helo ciyaaro badan tobankii sano ee ugu danbaysay.